I-Luxury Stunning Rural Apartment Nr. Ludlow
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTamzin
I-Pheasants Rest yindawo entle kwaye ebanzi yeeholide. Ibekwe ngaphakathi kwipropathi yethu kwaye ijonge ngaphandle kwemihlaba yethu yabucala.
Ifakwe eKnowbury ilali encinci eShropshire, iimayile ezi-4 ukusuka kwidolophu entle yaseLudlow.
Esi sisiseko esifanelekileyo ukonwabela ikhefu elinoxolo kude nesiphithiphithi, silungele ukuhamba / ukubona ukubona.
Yiza ujonge ilali ezukileyo enemitha yeenyawo ezininzi ukusuka emnyango, amava kuyo yonke le ndawo imangalisayo.
I-Pheasants Rest yindlu ezimeleyo ngokupheleleyo.
Le ndlu yinguqulelo yamva nje kwaye igqitywe kumgangatho ophezulu kakhulu. Le ndawo inomnyango wabucala wokungena kunye neengcango eziphindwe kabini zepatio ezivuleleka kwindawo egqunywe ngaphandle.
Ngaphakathi uya kufumana igumbi lokuphumla elikhulu, igumbi lokulala (igumbi lokulala kunye negumbi lokuphumla lahlulwe ludonga lobude obuyisiqingatha kunye neemfama ezimnyama), igumbi lokunxiba, elixhobisa ngokupheleleyo isidlo sangokuhlwa sasekhitshini, igumbi lokuhlambela elikhulu. Nceda uqaphele ukuba ishawa ngoku ayinamkhusane hayi umnyango weglasi njengoko ngenxa ye-COVID sithanda ukuyitshintsha / ukuyihlamba phakathi kweendwendwe. Umgangatho kwigumbi lokuhlambela unokutyibilika kancinci ngenxa yokutshizwa kwishawari kodwa sibonelela ngeemethi zamasele kunye neebhafu ukunceda ukulwa oku. Iimethi zokuhlambela ezongezelelweyo okanye eziNtsha ziya kuhlala zikhona ukuba uyazifuna.
Ukupaka kuyenzeka ngokuthe ngqo ngaphandle kwendlu kwindawo yakho ekhethekileyo yedrive yethu yabucala. Kananjalo ngaphandle kweminye imida yomnyango ephakanyisiweyo akukho zitebhisi.
Uxolo okwangoku asizivumeli izilwanyana zasekhaya.
** Akukho sikhenkcisi ekhitshini. Nangona kunjalo sinesikhenkcisi esincinci/esincinci esiphezulu esifumaneka xa usicelile. (Ilungele iityhubhu zomkhenkce kunye nebhafu ye-ayisikrimu)
*** Nangona kungekho matshini wokuhlamba kwindlu, ukuhlala ubusuku obu-4 okanye ngaphezulu sinokulungiselela ukufikelela okulinganiselwe kumatshini kunye nesivumelwano sangaphambili. Ukuhlala okufutshane kunokunikwa ufikelelo ngentlawulo encinci. Nceda uqhagamshelane nathi ukuze uxoxe ngeemfuno zakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Tamzin
Sihlala kwindawo kwaye siyakwamkela njengabahlobo. Siya kuba sesandleni ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.